I-iWatermark ye-iPhone 2.0 ekhutshiwe-i-App ebalulekileyo yoLwandiso loKukhusela iiFoto zakho ze-iPhone / i-iPad | Plum emangalisayo
Aprili 11, 2011
IWatermark ye-iPhone 2.0 Ikhutshwe-Esona sixhobo siBalulekileyo sokuNgabonisa ukukhusela iifoto zakho ze-iPhone / iPad
UMHLA: 11 Epreli 2011
I-0.99 Watermarking App yeProfessional, iShishini kunye nokuSebenzisa. Ngokukhuselekileyo, khusela, ukhusele imifanekiso / ubugcisa bakho ngombhalo obonakalayo okanye umzobo okanye i-watermark ye-QR. Nje ukuba ifakwe kwifoto le watermark ebonakalayo ibonisa indalo kunye nobunini bakho. Ukujonga ukubonwa nokubaluleka kokuhambahamba kubaluleke ngakumbi njengokutyikitya igama lakho kwifoto ukubonisa ngokucacileyo, nokuba yeyiphi ifoto yakho, yeyakho. Ukujonga amanzi kunokusetyenziselwa ukongeza umyalezo wakho okanye iigraphics ezimnandi kuso nasiphi na ifoto.
iWatermark ye-iPhone / iPad. Ikhonkco lokufunda ngakumbi lilapha:
Ukukhuphela kwiVenkile ye-iTunes yiza apha:
Inguqulelo 2.0 yokongezwa
- yongeze iifonti ezininzi.
- ngoku chwetheza ngokulula oonobumba be-©, ® kunye ne-™ kwii-watermark zombhalo.
-Ngoku ngoku chwetheza ngokulula kumhla kunye nexesha lokubhaliweyo kokubhaliweyo.
- uncedo oluhlaziyiweyo.
Abasebenzisi be-iTunes Rave
“Elona xesha le-watermark lokusebenza! NDONWABILE ngoku ukuba olu hlaziyo lulapha. Okokugqibela insiza yew watermark evumela isimboli yelungelo lokushicilela, ukhetho oluninzi lwefonti kunye nemibala kunye nokujongana ngokulula. Iimpendulo ezikhawulezileyo kakhulu! Ukuphendula ngokumangalisayo kwiingcebiso zabathengi! Enkosi!" -UlwandleGirl71
Kutheni Watermark iifoto zakho?
Isebenza njani iWatermark?
Thatha okanye ukhethe ifoto uze ukhethe ekukhetheni ii-watermark zomzekelo (zombini isicatshulwa kunye nemizobo) okanye ukongeza isicatshulwa sakho okanye i-graph watermark.
Xa usenza i-watermark unokuyihlengahlengisa ngokulula ubude bayo, i-opacity, ifonti, umbala kunye ne-angle.
Emva kwexesha ungasebenzisa ezi watermark naninina xa uthatha ifoto okanye ukhethe ifoto kwaye ugcine ifoto ubonwe kwilayibrari yemifanekiso okanye i-imeyile kwizigqibo ezahlukeneyo.
I-iWatermark ye-iPhone iza nemizekelo yokubhaliweyo (amagama, imihla, njl. njl.) kunye nemizobo (iisiginitsha, iilogo, njl. njl.) iiwatchark ongazisebenzisa kwangoko ukuvavanya iWatermark.
I-iWatermark ye-iPhone yiprofayili yenqanaba lobuchwepheshe bokujonga iifoto ze-iPhone kunye neminye imifanekiso. Yeyona ndlela ilungileyo yokutyikitya umsebenzi wakho wobugcisa kwaye uyamkelwe njengepropathi yakho yokuqonda. iWatermark ye-iPhone ilula kwaye isebenza kwi-iPad nayo. Kukho iinguqulelo zeWatermark zeMac kunye neeWindows.
Malunga ne-plum AMAZING SOFTWARE
IPlum emangalisayo (ngaphambili iSoftware) yinkampani yabucala ebekelwe i-iPhone, iMac, iiWindows kunye nezicelo zeselula. IPlum emangalisayo ngumboneleli wehlabathi wezicelo zeselfowuni kunye needesktop ukusukela ngo-1995. Bakwangabenzi bezi nkqubo zokusebenza:
Ngolwazi olongezelelweyo kule software ingentla, nceda undwendwele
Iingcali zemidiya ngolwazi oluthe kratya kunye nekopi yokuphonononga isoftware yethu, nceda unxibelelane nathi.
Isoftware Plum emangalisayo
Ulwazi ku: plumamazing.com
Ukuze ungabhalisi, phendula nje kwaye uchwetheze "ungabhalisi" kumgca wesifundo.